फोन निकै सुस्त चार्जिङ भैरहेको छ ? यसरी बढाउन सकिन्छ तिब्रता - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com फोन निकै सुस्त चार्जिङ भैरहेको छ ? यसरी बढाउन सकिन्छ तिब्रता - खबर प्रवाह
फोन निकै सुस्त चार्जिङ भैरहेको छ ? यसरी बढाउन सकिन्छ तिब्रता
आफ्नो फोन निकै सुस्त चार्ज भैरहेको गुनासो धेरैको हुन्छ । बजारमा रहेका नयाँ स्मार्टफोनहरुमा उपलब्ध अल्ट्रा फास्ट चार्जिङका कारण पनि प्रयोगकर्ताहरुलाई आफुसँग भएका पूराना मोडेलका फोनको चार्जिङ स्पीड सुस्त लाग्न सक्दछ ।
तर कतिपय यस्ता तरिका छन् जसको सहयोगमा तपाईंले आफ्नो फोनलाई तिव्रगतिमा चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ । खासगरी यदि तपाई एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने यी काइदाहरु निकै उपयोगी हुन सक्दछन् ।
फास्ट चार्जर खरिद गर्नुहोस्
आफ्नो फोनलाई छिटो चार्ज गर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका भने फास्ट चार्जर खरिद गर्नु नै हो । फास्ट चार्जरको सहयोगबाट े फोनलाई तिव्र गतिमा चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ । यो प्रकारको चार्जर वा पावर एडाप्टर खरिद गर्दा फोनले त्यस्तो फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ कि गर्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ ।
धेरै ब्याट्री खपत गर्ने फिचर्स बन्द गर्नुहोस्
स्मार्टफोनमा कतिपय यस्ता फिचर्स हुन्छन् जसले अन्यको तुलनामा धेरै ब्याट्री खपत गर्दछन् । यदि चार्जिङका बेला वाइफाइ, ब्लुटुथ लगायतका अन्य फिचरहरु बन्द गर्नुभयो भनेपनि फोनको चार्जिङ गति केही बढ्नेछ ।
ओरिजिनल चार्जिङ केबल प्रयोग गर्नुहोस्
फोनसँगै बक्समा आउने ओरिजिनल केबललाई फोन चार्ज गर्नमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । यदि तपाईंको सुरुको चार्जिङ केबल खराब भएमा सोही ब्राण्डको सक्कली केबल खरीद गर्नुहोस् । बजारमा पाइने सस्तो मूल्यका चार्जिङ केबल तथा चार्जिङ एडाप्टर प्रयोग गर्दा चार्जिङ ढिलो हुनेमात्र होइन फोनमा गडबडी पनि आउन सक्दछ ।
फोन चार्ज गर्दा एयरप्लेन मोडमा राख्नुहोस् । यसो गर्नाले फोनमा चार्जिङ स्पीड बढ्दछ । तर यसो गर्दा स्मार्टफोन नेटवर्क र अन्य सम्पर्कबाट विच्छेद हुन्छ । त्यसैले फोनमा ब्याट्रीको खपत कम हुन्छ र फोन छिटै नै चार्ज हुन्छ ।
चार्जिङका बेला फोनको प्रयोग नगर्नुहोस्
धेरै मानिसले चार्ज गरिरेको बेला समेत स्मार्टफोन चलाउने गर्दछन् । यसो गर्दा चार्जिङसँगै ब्याट्रीको खपत पनि बढिरहन्छ । यसो गर्दा फोन चार्ज हुन लामो समय लाग्दछ । त्यसैले चार्जिङका बेला फोन प्रयोग नगर्नाले स्मार्टफोन छिटो चार्ज हुन्छ ।
अब जन्मिन्छन बालेन जस्ता हजारौं उम्मेदवार !
पूजा गर्दा छुटाउनै हुन्न ५ चिज, झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती !